Seddax nin oo dil ka geystay masjid ku yaalla magaalada Baydhabo oo gacanta lagu dhigay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Seddax nin oo dil ka geystay masjid ku yaalla magaalada Baydhabo oo gacanta lagu dhigay (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu soo bandhigay seddax nin oo la sheegay ay ka dambeeyeen dil dhawaan xaafadda Towfiiq loogu geystay mid kamid ahaa ergadii halkaasi kusoo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Allaha u naxariistee marxuum Sheekh Maxamed Deyr ayaa habeen hore lagu dilay xilli uu ku dhex sugnaa masjid ku yaalla xaafada Towfiiq ee magaalada Baydhabo.
Howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada booliska iyo kuwa nabad-sugidda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan seddaxdaan nin ee la sheegay inay ka dambeeyeen dilka marxuum Sheekh Maxamed Deyr.
Saraakiisha ciidamada booliiska ee maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in soo qabashada seddaxdaasi nin ay ku suurto-gashay, kadib markii ciidanka booliiska ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah raggaasi, kaasoo markii danbe farmuuqay labada kale.
Goobta lagu soo bandhigay seddaxdaasi nin ee dilka geystay ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka hub ka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyada maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen (Xasan Eeleey), wuxuuna sheegay in howlgal qorsheysan ragaan lagu soo qabtay dhawaana maxkamad lasoo taagi doono.